သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်အဆင်သင့်ရယူခြင်း | USAHello ထံမှအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာနေစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုလုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြင်ဆင်ဘယ်မှာအလုပ်အကိုင်များရှာထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
သင်ပြုသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်တိုအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုစဉ်းစား start ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အတွေ့အကြုံရှိသည်ပါဘူး? အခြားတိုင်းပြည်ကနေသင့်ရဲ့အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် USA တွင်အသုံးပြုရနိုင်သလား? အဘယ်အရာကိုရက်ပေါင်း, နာရီ, သငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြပြီးကြိမ်? ရှေ့ဆက်အချိန်ဤအမှုအရာတွေအကြောင်းစဉ်းစားသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်.
သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအတူတကွစုဝေးစေ. သငျသညျအထဲကဖြည့်ရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် စက္ကူအလုပ် applications များ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထား. သင်တို့သည်လည်းသူကရေးသားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် နှင့် အဖုံးအက္ခရာများ.
အလုပ်၏အဘယျသို့သောသင်သည်အတိတ်ကာလ၌ပြစ်မှားမိပါပြီ? သငျသညျအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု၏အဘယျသို့သောရှိဘူး? ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အလုပ်အကိုင်အဘယ်အရာကို type ကိုသိပါကကူညီကြလိမ့်မည်. ဥပမာ, သငျသညျအတိတ်ကာလတစ်စက်ပြင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျတဖနျစက်ပြင်အဖြစ်အလုပ်ရှာတွေ့နိုင်မည်အကြောင်း. သငျသညျဆေးပညာအလုပ်လုပ်ခဲ့ အကယ်., သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရန်မည်သို့သုတေသနနိုင်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုငါသိ၏ဘာမှများမှာ. သင်သည်သင်၏အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားနေလျှင် ကျွမ်းကျင်မှု အဖြစ် အမျိုးအစားများ သငျသညျရှိခဲ့အလုပ်အကိုင်, သင်သည်လက်ျာကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကသင်အလုပ်အကိုင်အသစ်သောအမျိုးအစားများကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်.
1. အထွေထွေအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု များစွာသောအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားကြောင်းသူများဖြစ်ကြ၏. သူတို့ဟာဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုပါဝင်သည်
အချိန်မှန်, ဖော်ရွေဖြစ်ခြင်း, အခြားလူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း, လုံခြုံစိတ်ချစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့
အလျင်အမြန်သင်ယူနိုင်ဖြစ်ခြင်း. ကျွမ်းကျင်မှုဤအမျိုးအစားများကိုတစ်ခါတစ်ရံ "ပျော့ကျွမ်းကျင်မှု။ " ဟုခေါ်ကြသည်
2. အလုပ်-related ကျွမ်းကျင်မှု ထိုကဲ့သို့သော forklift လည်ပတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အမှုအရာတို့ပါဝင်သည်, အတိုင်းအတာ
တိကျစွာ, ထရပ်ကားကိုမောင်း, တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုပွငျဆငျသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို operate. ကျွမ်းကျင်မှုဤအမျိုးအစားများကိုတစ်ခါတစ်ရံ "ခက်ကျွမ်းကျင်မှု။ " ဟုခေါ်ကြသည်
သင်သည်သင်၏ပညာရေးနောက်ခံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ကျောင်းများ၏အမည်များနှင့်တည်နေရာများပါဝင်သည်, စတင်ရက်စွဲများပြီးအောင်နှင့်သင်ဘွဲ့ရရှိမရှိ.
အထက်တန်းကျောင်းဖြည့်စွက်ရန်အဆင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်များကို - သင့်ဇာတိနိုင်ငံတွင်ပညာရေးစနစ်ကအမေရိကန် system ထဲကနေကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, ဥပမာ. အဆိုပါတက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်သင်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေထက်အောင်မြင်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိစေခြင်းငှါ. တခါတရံသငျသညျဇာတိဖွားမေးမြန်းခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများသို့သင်၏အချက်အလက်များကို "fit" ကိုရပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျသို့ရဖို့ကျော်ကြားသို့မဟုတ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်တဲ့ကျောင်းကိုသွားကြပြီစေခြင်းငှါ,. အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်ကျောင်းရဲ့နာမညျကိုအောက်မှာကြောင်းရေးသားဖို့သေချာပါစေ. သင်တို့ကဲ့သို့တစ်ခုခုပြောနိုင်, "ဖိလစ်ပိုင်အဆိုပါနည်းပညာတက္ကသိုလ် Institute မှတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကျောင်းတွေထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည်။ "
သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ဘာသာစကားမပြောတတ်ခဲ့လျှင်, ကြောင်းကိုသင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်အရေးပါသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထို့အပြင်အင်္ဂလိပ်မှတပါးသငျသညျပွောဆိုတိုင်းဘာသာစကားရေးချဖို့သေချာပါစေ. အင်္ဂလိပ်ချရေးမနေပါနဲ့. အလုပ်ရှင်များကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမှသင်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုယူဆပါလိမ့်မယ်.
ဆက်ဖတ်ရန် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြံပေးချက်များ နှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း template ကို download လုပ်ပါ.
Professional ကညွှန်းဆိုသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်သမားများမှာပြောပါလိမ့်မယ်သူကလူမျိုးဖြစ်ကြ၏. သင်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိသည့်အခါဒါဟာကိုးကားထောက်ပံ့ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းအရှိဆုံးသို့မဟုတ်သင့်အတိတ်အလုပ်ညွှန်းဆိုအပေါငျးတို့သညျအခွားနိုငျငံတှငျများမှာ. သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းနှင့်သင့်အလုပ်ရှင်တူညီတဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုနိုင်လျှင်သင်တစ်ဦးရေခြားမြေခြားကိုကိုးကားသုံးနိုငျ. သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းအင်္ဂလိပ်ပြောတတ်နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်အင်္ဂလိပ်ပြောတတ်ပါလျှင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဆိုမာလီမပြောတတ်လျှင်, သင်တစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်သင့်နိုင်ငံရပ်ခြားအလုပ်ရှင်သုံးစွဲဖို့နိုင်မည်အကြောင်း.
သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုးကားအကြောင်းပိုမို. သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်ညွှန်းစာရင်းများအတွက် template ကို.
သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သင်ပထမဦးဆုံးကို format ဖို့ဘယ်လိုအပါအဝင်, အလယ်တန်းနှင့်နောက်ဆုံး အမည်များ ပလီကေးရှင်း, သင့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်, လိပ်စာ, နှင့် အီးမေးလိပ်စာ. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမွေးသင့်ရဲ့နေ့စွဲအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အသက်အရွယ်, သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ. သငျသညျ applications များအတွက်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဖတ် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြံပေးချက်များ နှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း template ကိုရှာတွေ့.
သင်တရားဝင် USA တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်သက်သေပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်ရန်သင့်လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်ပေးရမည်. သင်မည်သည့်ပြစ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်တစ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်ကမှသက်သေပြစေခြင်းငှါ.
သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်အရေးကြီးသည်က. ဒါဟာသင့်ရဲ့ညွှန်းဆိုပေးဒါမှမဟုတ်သင်အလုပ်အကိုင်များကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဆိုလိုတယ်. သင်ပထမဦးဆုံးအလုပ်အတွက်, ဥပမာ, အခါသင်လုပ်နိုင်သငျနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်သောလူကိုသိရန်ရ.
သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဝိုင်းသို့တက်ရောက်ရန်နိုင်ပါတယ်. ကုမ္ပဏီများမကြာခဏသူတို့ရှိသည်အလုပ်အကိုင်အဖွင့်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်မည့်ဖြစ်ရပ်များကိုကိုင်ထား, သူတို့အဘို့ရှာကြသည်ဝန်ထမ်းများ၏ကြင်နာ, သငျတို့သလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်လို. အလုပ်တစ်ခုမျှတသွားသည့်အခါ, သင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏မိတ္တူများယူဆောင်လာသေချာအောင်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ကိုယ်စားလှယ်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်, သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အလုပ်အမျိုးအစားကိုရှင်းပြ, သူတို့ကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပေး.
သင့်အနေဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဧရိယာ၌ networking ဖြစ်ရပ်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Facebook ကဖြစ်ရပ်များစာမျက်နှာ, စစ်ဆေးနေ LinkedIn တို့ လာမည့်ကွန်ယက်အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်, သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးသတင်းများတက်သည်လက်မှတ်ထိုး Eventbrite နှင့် Meetup. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဖြစ်ရပ်များ networking အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ.
အလုပ်ရှာဖွေရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတစ်ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အွန်လိုင်းတဲ့ professional ရှိနေခြင်း Create. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး tools များဖြစ်ကြသည် LinkedIn တို့, CareerBuilder, တကယ်ပါပဲ, နှင့် မှန်တံခါး. သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖို့ဘယ်လို.
အချိန်ရှိရင်, ဒေသခံတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းကမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်း. သငျသညျတခြားသူတွေကိုကူညီနေချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်သစ်တွေဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျရဖို့ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေး၌သင်တို့ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်, သငျတို့သအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရည်ညွှန်းလိုအပ်သည့်အခါသင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်စားစကားပြောဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူကိုအဆက်အသွယ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်. အကြောင်းပို Read လုပ်အားပေးများနှင့်အလုပ်သင်အလုပ်အကိုင်များ.
သင်သည်သင်၏ဒီဂရီအကဲဖြတ်ရှိခြင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တစ်ဦးမှတ်တမ်းအကဲဖြတ်ကုမ္ပဏီရန်သင့်အထောက်အထားများတင်ပြရန်. အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်သင်၏အတိတ်ပညာရေးကိုကြည့်နှင့်သင့်ဒီဂရီသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို USA အတွက်သုံးစွဲဖို့တရားဝင်သည်ဆိုပါကဆိုလိမ့်မည် . ဒီဝန်ဆောင်မှုတခါတရံစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်.
အများစုမှာအလုပ်ရှင်များအနေနဲ့အကဲဖြတ်ဘို့မမေးပါလိမ့်မယ်. ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်လေ့လာသင်ယူတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဘယ်လိုအကြောင်းဆက်ဖတ်ရန် သင့်ရဲ့နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းသို့မဟုတ်ဒီပလိုမာအကဲဖြတ်ရ.